Italy football kazwelonke ithimba kuyeza isikhathi uma ufuna ukwenza ushintsho ezivamile - kakhulu abaholi iqembu kanye enkulu noma akazange iqhaza football international, noma kakade engaphezu kwamashumi amathathu. Nokho, asikwazi ukuthi e-Italy kunabaningi kangaka amathalenta uyakufanelekela ngempela.
Domenico Berardi - lena gem ezingavamile ukuthi esikhathini esizayo esiseduze, kungenzeka kukhanye force okugcwele. Lokhu winger enemisebenzi ngubani ungadlala noma ilungelo noma ngakwesobunxele ukuhlasela, kuyinto iziqu club Italian "Sassuolo". Ngo-2012, lapho ithalente abasha wayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili, naye kwathiwa usayine inkontileka professional, kodwa ngo-2013 isiphetho womdlali wangenela club enkulu e-Italy - eTurin "Juventus". Yena aluthola winger oneminyaka engu-19 ubudala, ezine kanye euro eziyisigidi nesigamu, kodwa wawunika ku ukuqasha iminyaka emibili emuva "Sassuolo", kangangokuthi wayengakwazi ukuthola umdlalo umkhuba. Nokho, njengoba ngo-2013, ngo-2015 ithalente abasha lingenandawo at inhliziyo eTurin club, ngakho "Sassuolo" wathatha isivumelwano iphuzu futhi wathenga amalungelo umdlali ngesikhathi "Juventus" I-euro ayizigidi ezingu-eziyishumi - Kwaba buhlungu sina kwesabelomali iqembu elincane, kodwa angizisoli. Kodwa ngo inkontileka entsha lelipelwe ilungelo kuqala lokuhlengwa, elisemnyango "Juventus". Lokhu kusho ukuthi eTurin club ehlobo lika-2016 uzokwazi ibuyise winger ngoba kwezigidi ezingu-25-euro - Yebo, uma efuna ke. Ezinyangeni ezizayo kuyokhanya, kodwa kuhle ukucabangela ukuthi umsebenzi Domenico Berardi ngesikhathi iqembu lakhe zamanje wazivelela.
Domenico Berardi kwaba ngo "Sassuolo 'ningasheshi - Wafika Academy of the club eneminyaka engu-iminyaka engu-16 futhi eminyakeni emibili ubudala, wadlalela iqembu kwentsha, aze wayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili, njengoba kushiwo ngaphambili. Yingaleso sikhathi lapho enikela futhi inkontileka professional olusemthethweni. Into eyangimangaza kunazo zonke ukuthi winger ngokushesha bathola indawo uhlelo kokuqala futhi ngokoqobo kweso waba omunye wabadlali ukhiye eqenjini. Khona-ke "Sassuolo" idlale Serie B, okungukuthi, e-league ukubaluleka Italy yesibili, ngakho ukujwayela futhi uzuza okuhlangenwe nakho ayenakho amathuba amaningi. Domenico Berardi ukudlalwa 37 aphume 42 okufanayo, ezimbili zazo uye walahlekelwa ngenxa umonakalo, no one - ngenxa yokuhoxiswa. Ukuze isizini, yena amagoli 11 futhi wanikeza esiza eziyisithupha kuka wabasiza kakhulu iqembu lakhe uthole ukufinyelela Izilimi enkulu.
Abaningi babekholelwa ukuthi Berardi Domeniko kanye "Sassuolo" ngeke kuhlale sikhathi eside Serie A, kodwa konke kwenzakala ngendlela ehluke kakhulu. Ezine zokuqala imidlalo wethimba lakhe winger uNdunankulu league aphuthelwe ngenxa yokuthi ukuthi umdlalo wokugcina ngesizini edlule, wathola ikhadi elibomvu, bakhonza ukumiswa ezifanele. Kodwa-ke ngokushesha wangena umdlalo futhi masinyane baqala ukusiza nabalingani bayo impumelelo ezingalindelekile. Isidlali idonse kakhulu ukunakwa, ngoba DEBUT yakhe sizini 29 imidlalo, wakwazi ukuthola amaphuzu amaningi njengoba 16 imigomo, futhi ngaphezu kwale ukunikeza esiza eziyisithupha. Kungani ukufana ambalwa ngakho? Iqiniso lokuthi igazi enobudlova abasha Italian ingenye bokwenza eyinhloko ithalente abasha. Wakwazi ukuthola izincwadi elinye ikhadi elibomvu, ngenxa okuyinto aphuthelwe imidlalo emithathu, futhi imidlalo emibili esahambile amakhadi ngenxa amabili aphuzi. Nokho, lokhu akusho negate yokuthi Berardi Domeniko iyona omunye wabadlali abanekhono iningi umugqa ehlasela, hhayi kuphela e-Italy kodwa emhlabeni wonke.
Berardi Domeniko, ogama biography isivele amehlo abaningi abathandi bebhola, baqhubeka mashi lwakhe lokunqoba ngo-2014. Ngakusasa inkathi yimpumelelo ulilethele Italian 32 ngaphandle enkundleni e-Serie A kanye nasemigwaqweni ezimbili - ku-COPPA Italia. Ngo ubuqhawe Waqhubeka ukubonisa ezingeni eliphezulu, amagoli 15 futhi wanikeza 11 ukusiza. Cup futhi waziveza uhlangothi ezinhle kakhulu - kulezo imidlalo emibili, wanikeza esiza ezimbili. Nokho, futhi inkinga ka vehemence nesihluku esehlale - in the emzuliswaneni wesibili, Domenico Berardi, mdlali umqondo yokudala, wathola ikhadi elibomvu, okuyinto kuhambisana ukuhoxiswa trehmatchevuyu, futhi ngokuhamba isizini, wakwazi ukuhlunga amakhadi amathathu aphuzi futhi uthole odnomatchevuyu ukungafaneleki.
Ngesizini edlule ngalesi sikhathi ngoba "Sassuolo" winger wachitha ngesikhathi esifanayo ezingeni esethembisayo, kodwa banaka kakhulu iqembu, hhayi ukuzama ukuxazulula konke nguwe noma wenze ukusiza, kumnyama kubomvu. Ngenxa yalokho-29 ukufana naye uye amagoli ayisikhombisa futhi wanikela esiza eziyisithupha, kodwa imizamo yakhe wazibonakalisa kubaluleke kakhulu kunokuba esikhathini esidlule - "Sassuolo" ephethwe ukufika entanjeni endaweni yesithupha, okuyinto yibhange club indawo-Europa League - okokuqala emlandweni . Ngokuqondene luhlata Berardi, kuze kube manje ke alukapheli. Ngisho ngesikhathi sayo sokugcina, wayengekho ngaphandle ikhadi elibomvu futhi ukuhoxiswa trehmatchevuyu namakhadi kabili kwabonakala aphuzi futhi zaphumela okukodwa okufanayo kuzo umdlalo. Cishe, kusenzima abasha, futhi esikhathini esizayo, lo winger ezosebenza ngobuchule, ephephile futhi enengqondo kakhudlwana.
Kuze kube manje, Berardi akukaze ngokuthi zibe omdala Italy football eqenjini lesizwe, kodwa iqembu yentsha 21, nguye induna. Ukuze wakhe, wachitha 17 imidlalo, amagoli amathathu kanye wanika esiza ezine.
Indlela ukubhala isicelo: amaphuzu abalulekile
Amathiphu ambalwa sendlela ahlanze ekhaleni yezingane